Internet Download Manager 6.12 Beta Build 3+Patch..! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီနေ့ Internet Download Manager 6.12 Beta Build3လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! သုံးရတာ အဆင်ပြေလိမ့်မည်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်...! Update လေးထွက်လာလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ...! ကျွန်တော် Patch ဖိုင်လေးပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်...! IDM အကြောင်း သိနေပြီဖြစ်သောကြေင့် ရှင်းမပြတော့ဘူးနော်...! အသုံးလိုရင်တော့ Mediafire လေးဖြင့်တင်ပေးထားပါတယ်...!
" ဒီမှာယူသွားပါ..." ( 4.68 MB )
အသိပညာ အတတ်ပညာ တိုးပွားနိုင်ပါစေ....!
No Response to "Internet Download Manager 6.12 Beta Build 3+Patch..!"